डोटीमा अज्ञात समूहद्धारा ट्रकमा आगजनी
डोटीमा अज्ञात समूहले एक ट्रकमा आगजनी गरेको छ । डा.के.आई.सिं राजमार्ग अन्तरगत जिल्लाको शिखर नगरपालीका वडा नं. ८ गोल्मागाड भन्ने ठाउँमा आज बिहान करिब पौने ५ बजेको समयमा भे १ ख ११५१ नं. को ट्रकमा आगजनी भएको हो । बर्दीयाबाट अछामतर्फ गईरहेको सामान लोड गरिएको ट्रकमा आगजनी भएको चालक हनुमान चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाले ५ , ६ जनाको समूह आएर आज बन्द हो, तँलाई थाहा छैन भन्दै गाडीको अगाडी र पछाडीको टायरमा पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेर भागेका बताउनुभयो । उक्त समूह गाडीभित्रै पसेर चालकसँगै आफ्नो पनि मोबाईल थुतेर लगेको ट्रकका सह–चालक रोहित बि.क.ले बताउनुभयो । ट्रक बाँकेको कोहलपुरका बुद्धी सिं बिष्टको रहेको श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आगजनी गर्नेको प्रहरीले खोजी गरिरहेको प्रहरी चौकी तिलतालीका ईन्चार्ज लोकेन्द्र बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो । यद्यपी आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल बन्दको घोषणा गरेकाले सोहि पार्टीबाट उक्त आगनी गराईएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।